Hlola i-Philippines - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili ePhilippines.
Okufanele ukwenze ePhilippines.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yePhilippines
Bukela ividiyo ekhuluma ngePhilippines
Hlola iPhilippines isiqhingi esikhulu eSouth-East Asia yeziqhingi ezingaphezu kwezinkulungwane eziyisikhombisa ezitholakala phakathi koLwandle lwasePhilippine nolwandle lwaseNingizimu China emaphethelweni asempumalanga ye-Asia.
Amabhishi amaningi amangalisayo ayingxenye nje yolunye lwamaphethelo amade kakhulu emhlabeni futhi kuthatha iminyaka eyi-20 ukuchitha usuku kuzo zonke iziqhingi. Kusukela ezikhathini zamakholoni zaseSpain, izwe bekulilizwe lamaKatolika e-Asia. Ezingaphezu kwekhulu izinhlanga, inhlanganisela yamathonya angaphandle kanye nokuhlanganiswa kwesiko nezobuciko kuthuthukisile ukwahluka kobunikazi bePhilippines kanye nesimanga sokuthi yiPhilippines.
Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbalwa edlule, abafuduki bokuqala ePhilippines bawela ulwandle olungenamkhawulo namabhuloho asuka ezweni elisuka ezweni laseAsia ukufika kuleli qembu leziqhingi. Lawa kwakunguNegritos noma ama-Aetas ahlobene I-Melanesians, I-Australia Ama-Aborigine namaPapuans. Izizukulwane eziqondile zalaba bantu zisatholakala, ikakhulukazi e-Negros Oriental.
Isimo sezulu sishisa kakhulu, kanti ngoMashi kuya ku-Meyi kuyizinyanga ezishisa kakhulu. Isikhathi semvula siqala ngoJuni bese sidlulela ngo-Okthoba sinezichotho ezinamandla. Izinyanga ezipholile kunazo zonke ziqala ngoNovemba kuya kuFebhuwari, kuthi maphakathi noJanuwari kuze kube kuphela uFebhuwari kubhekwe njengento engcono kakhulu yesimo sezulu esipholile nesomile.
Isiko lePhilippines lehluke kakhulu. Kukhona isiko lomdabu laseMelanesia nelase-Austronesian, elibonakala kakhulu ngolimi, ubuzwe, ukwakhiwa kwendabuko, ukudla nemidanso. Kukhona nethonya elithile elivela eJapan, China, India, Arabia, neBorneo. Ngaphezulu kwalapho kunethonya elinamandla le-Hispanic from Mexico futhi Spain, njengasenkolweni, ukudla, umdanso, ulimi, imikhosi, ukwakhiwa nobuzwe. Ithonya lakamuva elivela e-US libuye libonakale emasikweni.
Imithetho yasePhilippine nezinqumo zenkantolo, ngaphandle kokungajwayelekile, zibhalwe kuphela ngesiNgisi sase-US.
Njengoba ineziqhingi eziyizinkulungwane eziyisikhombisa, iPhilippines inamadolobha amaningi. Uhlu olungezansi ngamadolobha ayisishiyagalolunye abaluleke kakhulu izivakashi, ezinye zazo ezingamadolobha ezifundazwe nezikhungo zezentengiselwano nezezimali, kanye nesiko nomlando.
Manila - inhlokodolobha yezwe ingelinye lamadolobha anabantu abaningi emhlabeni - nakho konke lokho kusho ukungcola, ubugebengu, ubuphofu basemadolobheni kanye nokugcwala kwabantu - onamapaki ambalwa. Kodwa-ke, abantu abamomothekayo, abanohlonze futhi abanobungcweti ngokwabo bangumusa waso wokusindisa, kunokuba kube yizikhumbuzo ezimbalwa ezisindayo, izimpawu zomlando nokubona okusakazekele kabanzi kulo lonke leli dolobha nendawo yalo ezungeze iMetro Manila!
I-Iloilo City - iyindawo yokuvakasha lapho izindawo zokudlela ezinhle kakhulu, iminyuziyamu, amahhotela, izifunda zokuthenga kanye nezindawo zamagugu edolobheni zilindelwe. Kuyaziwa kakhulu ngomkhosi waminyaka yonke we-Dinagyang. Ngaphandle kokuqoqwa kwayo kwezivakashi, i-Iloilo isebenza njengesango lesifunda saseWestern Visayas kanye nokuma okuthandekayo kwezivakashi eziqonde emabhishi aseBoracay naseGuimaras eseduze, i-Antique, iCapiz, i-Aklan, iBacolod, neNegros Occidental.
IBaguio - inhloko-dolobha yezwe ngenxa yesimo sezulu sayo esipholile, inamapaki anakekelwa kahle nezindawo ezinhle, futhi iyikhaya le "Igorot", abantu bomdabu baseCordilleras.
UCebu - Ungumuzi wokuqala owasungulwa yiNtshonalanga ePhilippines futhi uyisikhungo esikhulu sezentengiselwano, imboni, amasiko nezokuvakasha.
ICagayan de Oro - eyaziwa nge- "City of Golden Friendship", idume ngokufihla amanzi amhlophe futhi iyisango eliya eNyakatho Mindanao.
IDavao - elinye lamadolobha amakhulu emhlabeni ngokuya ngendawo yendawo, yaziwa ngokuhlala futhi ngokuba yindlu yaseMount Lapho, intaba ende kunazo zonke ePhilippines.
I-Tagbilaran - eyaziwa njengendawo yeSandugo (icompact yegazi) phakathi komnqobi waseSpain uMiguel López de Legazpi noRajah Sikatuna abamele abantu baseBohol.
IVigan - inhloko-dolobha yase-Ilocos Sur ne-UNESCO World Heritage Site, isikhungo sayo sedolobha esilondolozwe kahle siyisibonelo esihle kakhulu sokwakhiwa kwamakoloni eSpain ePhilippines. Kumenyezelwe njengenye yezimangaliso ezintsha ze-7 (amadolobha)
IZamboanga- eyaziwa nge- “La Ciudad Latina de Asia” (Idolobha Lase-Latin Lase-Asiya), iyimbumba encibilikayo phakathi kwamasiko amaPhilippines namaKristu amaSulumane, iziqhayisa ngama-mosque amadala, amasonto amakhulu kanye nezinhlaka zomlando zamakoloni.
IBanaue, ikhaya lama-Rice unyaka we-2000. Abantu bahlabeke umxhwele ngendlela ama-Igorots akwenzile ngayo lokhu, ngakho-ke amaPhilippines akubiza njengommangaliso womhlaba we-8th. Kuyisiza Samagugu Womhlaba we-UNESCO.
IBatangas, ikhaya eliyikhaya lokuzalwa komdanso wasePhilippines eqhosha ngezindawo ezingena emhlabeni ze-dive futhi idume ngamabhishi ayo. Ukutholakala komhlaba cishe ngamahora we-2 kusuka esikhumulweni sezindiza saseManila kuyenza indawo evumayo. Kuyikhaya leTaal Volcano nedolobha lamagugu eThaal.
IBoracay yisiqhingi i10km esinezihlabathi ezimhlophe.
ICamarines Sur inezixhobo ezinhle zamakhorali, kanye nezigxobo zesihlabathi esimnyama nomhlophe. Vakashela inkimbinkimbi yeCamarines Sur Watersport bese uya emanzini ukushushuluza.
I-Coron indawo yokwehla kokulimazeka ePhilippines. Imikhumbi eminingana yaseJapan yashiswa lapha phakathi neMpi Yezwe II. Ezinye izinto ezikhangayo zokudonsela emanzini zifaka phakathi izihlahla ezimnandi, impilo enhle yama-macro kanye nedive eyaziwa njenge-geothermal dive. I-Island hopping kungenye into edumile lapha.
I-El Nido iyindawo yokuhlala ogwini nendawo enkulu yabavakashi esiqhingini sasePhilippines iPalawan. I-El Nido iqukethe iziqhingi neziqhingi ze-45; ama-limestone cliffs nawo ayatholakala lapha, akha i-backstrop yeKarst efana naleyo etholakala eHa Long Bay, eKrabi naseGuilin. I-El Nido indawo ethandwayo yabantu bendawo ngesikhathi samaholide amade eViki eNgcwele kepha kuze kube muva nje, ibingaziwa kakhulu ngabavakashi bakwamanye amazwe. Amabhishi, amanzi acwebile (kude nedolobha elikhulu), ihlathi, imiphetho yamatshe amade kanye nezindawo ezinhle kakhulu zakha izinkanyezi ezihle zasolwandle.
IDonsol yiWhale Shark Capital yomhlaba, shona futhi ubone oshaka be-whale.
Isiqhingi saseMalapascua njengazo zonke iziqhingi ePhilippines, lesi siqhingi sibonisa indawo enhle yesihlabathi esimhlophe ogwini kanye nezingadi zamakhorali.
IPalawan inikela ngamabhishi amahle avame ukuhlalwa futhi amanzi anezimbaza zamakhorali ezihlala ezinhlobonhlobo zezinhlanzi, hhayi nje ama-coral kodwa futhi nezilwane ezinjenge-dugongs kanye nemisebe yama-manta. Hhayi nje amabhishi amhlophe namanzi okuthula, kodwa bheka iPaki yasePuerto Princesa Subterr nyanja Park, umhume onamadwala amahle futhi nomfula ongaphansi komhlaba.
IPuerto Galera, indawo ethanda ukuthandwa ngabantu phakathi kweviki eNgcwele ngenxa yemigwaqo emhlophe yesihlabathi futhi inezimbali ezinhle kakhulu.
ISabang ingumasipala ePuerto Galera, igxilisa amanzi ayo amahle futhi umangazwe izilo ezizobona.
ISagada yidolobha elincane esifundazweni sezintaba saseLuzon ePhilippines, eyaziwa ngokuba nesimo sezulu esipholile nesiqabulayo, imihume emihle, amabhokisi okulenga nezintaba zasolwandle.
Tagaytay, ukhathele ngesimo esidala sedolobha elinomsindo laseManila? noma ulahlekelwe yisimo sezulu esipholile? Iqonde eTagaytay, ihlinzeka ngombono weTaal Volcano, isimo sezulu sipholile futhi sivame ukutholakala eFilipinos sikhathele yisimo sezulu esifudumele saseTropiki ngeViki eNgcwele.
Amalayisense okushayela aphesheya asebenza ePhilippines isikhathi esingangezinsuku ze-30 ngemuva kokufika, ngemuva kwalokho Kudingeka Imvume Yokushayela Yezizwe Zonke noma ilayisense lokushayela lasePhilippine. Ukuhamba ngezimoto ePhilippines kuqhubekela ngakwesokudla, futhi iningi lezimpawu zomgwaqo zisiNgisi. Izimpawu eziningi zivumelana nemikhombandlela yokuklama esetshenziswa e-United States kodwa wonke amayunithi asetshenzisiwe ayimetric. AmaPhilippines ikakhulukazi asebenzisa ukuhanjiswa ngesandla ezimotweni zawo; kodwa-ke, uma uvakashela ePhilippines, futhi ujwayele ukushayela ukuthunyelwa okuzenzakalelayo, ukudluliswa okuzenzakalelayo kuyatholakala ezimotweni eziqashiwe, noma kunjalo, kubiza kakhulu.
IPhilippines inezilimi ezimbili ezisemthethweni: isiNgisi nesiFilipino
Izindawo Zamagugu Omhlaba ze-UNESCO: Bona izindawo ezihlaba umxhwele zeBanaue Rice eBatad futhi uthokoziswe indlela eyakhiwe ngayo, bheka uhlelo oluphumelelayo olubekiwe lwedolobha lamakoloni laseYurophu e-Asia; IVigan. Amasonto eBaroque (i-Inmaculada Concepción eManila, i-Nuestra Señora e-Ilocos Sur, San Agustín e-Ilocos Norte nase Santo Tomás e-Iloílo) ePhilippines azokumangaza ngokwakhiwa kwe-European Baroque.
Amasonto nezindawo zenkolo: Bheka iBasílica de San Sebastián eQuiapo; okuwukuphela kwayo yonke insimbi yensimbi noma i-basilica e-Asia. Ukuvakashela ikhatholika ledolobha kukufanele.
Izindawo Zokugcina Umlando: Isiza se-Intramuros, iRizal Park kanye ne-Blood Compact eBohol kufanele ukukubona futhi kuzokunikeza amazwibela omlando wezwe.
IMetro Manila inikezela ngamaMyuziyamu amaningi okufanele ukukuvakashela futhi icatshangelwa phakathi kwezikhuselo zesiko ePhilippines.
Amabhishi: Ukubhukuda emanzini aluhlaza okwesibhakabhaka iBoracay ne-El Nido, ilanga elangeni emabhishi asePuerto Galera nasePagudpud noma emabhishi akude futhi amahle kakhulu eBotolan, eZambales.
Izixhobo zamakhorali: Diyela iTubbataha Reef National Park futhi ubone amaqoqo amahle kakhulu empilo yasolwandle namakhorali. U-Anilao unikeza nezinketho ezinhle. Isikhathi esingcono kakhulu sokuntywila sihambile ngoMashi - Juni
Izilwane zasendle nezitshalo: Izilwane ezivamile ezingatholakali ePhilippines kuphela kanti iningi lazo zisengozini futhi zisongelwa. UPhilippine Monkey Odla Ukhozi; Ukhozi olukhulu kunazo zonke, iTarsier; isilwane esincanyana esibukeka njengesifokazi futhi singatholakala eBhol, eCarabaos naseTamaraws; izimpukane zamanzi ziwubhubhane kuphela ePhilippines, ngaphandle kwalezi zilwane, ezinye izinhlobo zamagundane, amalulwane nezingulube zamanzi nazo ziwubhubhane ePhilippines. Izitshalo ezingama-endemic zithanda ama-orchid afana ne-Waling-Waling one of the most rare lipale emhlabeni kanye nesinye esabiza kakhulu emhlabeni.
Ukuvakasha kwe-Eco kanye nezokuvakasha ezisimeme: Kunezinhlangano ezahlukahlukene ezihlinzeka ngalolo hambo. Yazi ukuthi ngoba igama lohambo liqukethe amagama afana ne-Eco / esimeme noma onesibopho asho ukuthi kufanele abize kakhulu. Kufanele futhi kushibhile, kubhekwe neqiniso lokuthi imikhiqizo yasekhaya kanye nezinsizakalo kufanele zikhushulwe. Ngaphambi kokubhuka uhambo olunjalo kuyanconywa ukuthi ushayele umgqugquzeli / inkampani ejwayelekile ukwazi ukuthi imali ihamba kuphi nokuthi imikhiqizo yasendaweni (imisebenzi yabaqondisi bendawo) ibandakanyeka kanjani. Kunamahambo ahlukahlukene ahlelwe nxazonke zePhilippines afana nalokhu: I-International Coastal Clean-up, i-Bataan Pawikan Conservation, iCulion & Coron Island Hopping & Clean-up, iSagada Kofi ne-Eco Tour, iBanaue Volunteer ne-Eco Tour.
Kunezinto eziningi kakhulu okufanele zenziwe ePhilippines kanye nomngane wethu u-Agness ovela etramping ubhale umhlahlandlela omuhle futhi onemininingwane ozokusiza uhlele kusengaphambili, ngakho-ke ngicela ubheke.
Eminye imisebenzi emihle ongazama noma izindawo ongayihambela yile elandelayo:
Imidlalo Yezindiza - Umkhosi waminyaka yonke we-Hot Air Balloon ubanjelwa eClark, e-Angeles ePampanga, ngaphandle kwamabhaluni e-Hot Air abukiswa, abantu babuthana kulo mcimbi ukuzodonsa esibhakabhakeni, imisebenzi eminingi ibuye ibanjelwe ngaphandle kokudonswa esibhakabhakeni kanye namabhaluni anomoya oshisayo. Umkhosi wenziwa phakathi kukaJanuwari noFebhuwari.
I-Bentosa neHilot ziyindlela ehlukile yasePhilippines yokwelapha, i-Bentosa iyindlela lapho inkomishi isimboza ikhandlela elikhanyayo yetiye bese ivutha amalangabi futhi ikhipha bonke ubuhlungu engxenyeni ethile yomzimba, iHilot imane nje iyindlela yasePhilippines yokwenza imashi.
Ukuhamba Ngebhodi - Amanzi nemimoya isebenza ngokubambisana ukwenza izwe libe yindawo yokuthola amatilosi esikebheni. IBoracay, i-Subic Bay ne-Anilao eBatangas ziyizindawo eziphambili.
Ukusindisa - I-Archipelago inezinhlelo ezithile zomhume ezingafani. ISagada yindawo eyodwa ethandwayo yokuphephela.
I-Dive - Luhlaza okwesibhakabhaka, amanzi acwebile nezinsingo eziningi zenzelwe ukutshuza okuhle. Uma kuqhathaniswa namazwe angomakhelwane, ukudonsela phansi ezweni kushibhile. Ungahlola noma ku-SCUBA noma nje ngokuhlwitha nokudonswa kwamahhala.
Imikhosi - Umasipala ngamunye, idolobha, idolobha kanye nesifundazwe sinomkhosi waso, kungaba okwezenkolo noma wokuhlonipha idolobha noma isizathu somlando.
Igalofu - Cishe sonke isifundazwe sinenkundla yokudlala igalofu, kuwumdlalo othandwayo phakathi kwabantu abakhethekile, abacebile nabadumile.
Ezokuvakasha Kwezokwelapha - IPhilippines inikeza umhlaba ochwepheshe abaningi bezokwelapha abanamanani amakhulu ashiya izwe minyaka yonke ngekusasa elingcono phesheya. Lokhu kukhombisa ikhwalithi yemfundo yezokwelapha kanye nezokuvakasha kwezokwelapha nakho kukhuphuka. Iningi livela eMelika naseYurophu njengoba liqhathaniswa namakhaya abo, ukunakekelwa kwempilo lapha kushibhile; okulingana ne-80% ngaphansi kwenani eliphakathi nendawo phesheya. Izibhedlela eziningi eziphakanyiselwe ukuvakasha kwezokwelapha ziseMetro Manila. Umuthi owenziwe ngokunye futhi uthandwa ngama-spas, ukuphulukiswa kokukholwa kanye nezinye izindlela zokwelapha ezisondelene nazo zonke iziqhingi.
Amapaki Kazwelonke - Inani lamapaki kaZwelonke azungeze i-60-70, afaka izintaba nezixhobo zamakhorali.
I-Mountain Biking - Iziqhingi ezinezintaba eziningi futhi zilungele abagibeli bezintaba. Amabhayithi iyindlela ehamba phambili yokuhamba ngokuhamba ezindaweni ezikude. Ezinye izinketho zifaka iBaguio, Davao, Iloilo, Banaue, Mount Apo neGuimaras.
I-Rock Climbing - I -atle Island, i-Atimonan, i-El Nido, i-Puting Bato, iWawa Gorge inezindawo ezinhle kakhulu eziqhingini zokukhuphuka kwamatshe.
I-Sea Kayaking - Iziqhingi zaseCaramoan eCamarines Sur, ePalawan, eSamar naseSiargao ziyathandwa.
Ama-Spas ayathandwa, ngezinketho eziningi, ama-Spas atholakala eduze namabhishi, izihloko zezimali njll.
Ukuhamba ngezinyawo - Uhla lwezintaba neziqongo kunikeza isimo sezulu esipholile sokuhamba futhi kungakunika umbono wezimbali ezinhle nezilwane zomhlaba wezwe elihle. Mt. IKanlaon neMount Pulag yizindawo ezinhle zokuhamba.
I-Visita Iglesia - I-Visita Iglesia (i-Visita yiSpanishi yokuvakasha, i-Iglesia iSpanishi seSonto; Ukuhambela Amasonto) kuwumkhuba owenziwa iningi lamaPhilippines amaRoma Katolika emasontweni, amasayithi angcwele, izindawo zokugcina, ama-basilicas njll. uthando lobuciko nezakhiwo; amasonto kuyindlela engcono kakhulu yokuchaza ukuthi yikuphi ukwakhiwa kwePhilippines.
I-Whitewater Rafting - Enye yezinto ezinhle kakhulu, uma kungenjalo okungcono kakhulu, kungenzeka ukuthi kube nokuhlanzeka okumhlophe emanzini eCagayan de Oro City, idolobha elisenyakatho neMindanao. Futhi, iDavao iyavela njengenhlokodolobha yaseWhitewater rafting eMindanao, uma kungenjalo ePhilippines.
Abashintshi bemali abahambanga kangako ePhilippines ngaphandle kwezindawo ezivakashelwa kakhulu. Umthetho wesithupha: imali engaphezulu ofisa ukuyishintsha, amanani angathandeka kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, Amabhange atholakala kakhulu ukushintshanisa imali kepha ajwayele ukubeka inani eliphansi (imvamisa ezungeze i-US $ 100) futhi anamahora okusebenza alinganiselwe, ngokuvamile i-09: 00-15: 00 phakathi nezinsuku.
Yazi ukuthi akekho umuntu ovunyelwe ukungena noma ukuphuma ePhilippines ephethe okungaphezulu kwe-₱ 50,000 (selokhu kwaba yiSepthemba 2016) yezinhlamvu zemali namaphepha ngaphandle kokugunyazwa kwangaphambili nguBangko Sentral ng Pilipinas. Labo abangazange bathole ukugunyazwa kwangaphambili kuzodingeka bamemezele imali ethe xaxa edeskini yangokwezifiso. Kodwa-ke ukuletha noma yiliphi inani ngohlobo lwemali yakwamanye amazwe kungokomthetho kepha noma yini engaphezu kwe-USD10,000 (noma okulingana nayo) kufanele kumenyezelwe.
Izivakashi zingaphinde zisebenzise ama-ATM ama-6,000 ezweni lonke ukukhipha imali noma ukucela ukuxhaswa ngemali.
Abanikazi bamakhadi wekhredithi (kanye nababusi) bangasebenzisa amakhadi we-VISA, MasterCard, American Express kanye ne-JCB ezindaweni eziningi zezentengiso ePhilippines kodwa abathengisi bavame ukudinga inani eliphansi lokuthenga ngaphambi kokusebenzisa ikhadi lakho.
Ukuthi uzodlani ePhilippines
Phuza amanzi atholakala kalula. Ijusi le-Buko (coconut young) nalo liphephile uma bengalingelanga iqhwa lendawo kulo. Qaphela futhi abathengisi bejusi beBuko, abanye bavele bengeze ushukela emanzini.
Umusa omncane uhamba ibanga elide. AmaPhilippines angabantu abanomusa kakhulu futhi abanomoya wokungenisa izihambi, kwesinye isikhathi aze abe nephutha. Zinike isikhathi sokumamatheka bese uthi "ngiyabonga", futhi uzothola izimpendulo ezingcono kakhulu. Uzothola impendulo engcono kakhulu uma uphonsa iTagalog encane, efana ne- "salamat", okusho ukuthi "ngiyabonga". Lapho ukhuluma nabantu abavame ngokwanele ukuba ngabazali noma ugogo nomkhulu wakho ePhilippines, kwaziswa kakhulu ukufaka po kwimisho yakho efana ne-salamat po, ucabanga ukuthi nayo isetshenziswa kakhulu ezimweni ezihlelekile phakathi kontanga yobudala futhi ikhipha ukumamatheka .
Amasonto eBaroque ePhilippines
Izindawo ezingama Rice zePhilippine Cordilleras
Idolobha elingokomlando laseVigan